DRC: Dib u eegista saxaafadda ee Sabtiga 24 - Agoosto - TELES RELAY
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS DRC: Dib-u-eegista saxaafadda ee Sabtidan 24 Agoosto - Afrika
DRC: Dib-u-eegista saxaafadda ee Sabtidan 24 Agoosto - Afrika
- Kulan dhexmara Tshisekedi iyo Sylvestre Ilunga iyo doodaha ku saabsan waxbarashada aasaasiga ah ee bilaashka ah ayaa ka mid ah mowduucyada sii huriyay wararka warbaahinta tooska ah ee lagala tashaday saakay Kinshasa.
CAS-INFO.CA oo kubbadda furaya ayaa ku dhawaaqay kulanka u dhexeeya Felix Tshisekedi iyo Sylvestre Ilunga, iyo cinwaanka: "Ilunga Ilunkamba waxaa ugu dambeyntii Sabtiga heli doona Tshisekedi, wuxuu ku dhawaaqay madaxweynaha". Dhawr faallood ka dib, ayuu qoray boggan, “madaxtooyada ayaa wada xidhiidhka. Waxaa la shaaciyey ilaa Khamiista, ugu dambeyntiina Sabtiga ayey tahay in Sylvestre Ilunga Ilunkamba uu la kulmo Felix Tshisekedi. Si rasmi ah, waxay noqon doontaa in la sameeyo isku-habeyntii ugu dambeysay, sida lagu sheegay barta twitter-ka ee Afhayeenka Madaxtooyada.
7SUR7.CD oo ku dhawaaqaya isla warkaas, wuxuu xusuusinayaa in "kalfadhiga aan caadiga ahayn durba la isugu yeeray Golaha Qaranka si loo dhageysto barnaamijka iyo maalgalinta dowladda ee Ilunga Ilunkamba. "
Wakaaladda Wararka Kongo (ACP) ayaa taas wargalineysa "Madaxweynaha dalku wuxuu u fidiyaa gawaarida ganacsiga gudoomiyaasha gobollada". Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Felix Tshisekedi, ayaa soo bandhigay Jimcaha, isaga oo u maraya madaxdiisa shaqaalaha Vital Kamerhe, gawaarida ganacsiga ee 26 oo dhammaantood ah dhul-beereedka, ayuu qoray ACP. Waxa kale oo la wadaagay hay’adda ACTUALITE.CD oo intaas ku dartay in madaxtinimada jamhuuriyada oo tirisa gawaaridaas inay qayb ka tahay barnaamijka degdegga ah ee Felix Tshisekedi, waxay ku dhawaaqeysaa in si dhaqso leh gacanta loogu soo dhigi doono, had iyo goorba gudoomiyaasha, alaabada iyo wax soo saarka beeraha.
Intaa waxaa dheer, POLITICO.CD, oo diiradda saareysa waxbarashada aasaasiga ah ee bilaashka ah, waxay weydiineysaa su'aasha: "Waxbarashada aasaasiga ah ee bilaashka ah ee DRC: khuraafaad ama xaqiiq? ".
Warbaahinta ayaa ku doodaya in wareysi gaar ah oo la siiyay Politico.cd, Emery Okundji, Wasiirka Ku-meelgaarka ah ee EPSP wuxuu xaqiijiyay dugsiga hoose ee bilaashka ah iyo maleeynta dhammaan khidmadaha waalidiinta ee dugsiga. "Si loo soo bandhigo waxtarka lacag la’aanta, miis wareeg ah ayaa Khamiisti ka furmay Kinshasa si loo baaro oo loo qeexo abaabullada ficil ee u oggolaanaya hirgelinta waxbarashadan aasaasiga ah ee bilaashka ah bilowga sanad dugsiyeedka 2019-2020. . "
Laakiin barta internetka ee macluumaadka internetka waxay kicisaa su'aalo ku saabsan agabka iyo dhaqaalaha ee ay tahay inay raacaan bilaashkan. "Marka laga hadlayo kaabayaasha dhaqaalaha inay helaan ardayda, tirooyinka rasmiga ah waxay ku dhawaaqaan ku dhawaad ​​iskuulo 5000 ah oo ku yaal guud ahaan Jamhuuriyadda. Kaas oo ah mid aad u yar laakiin halkan sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu dallacsiiyay inuu dhiso oo uu dayactiro meel u dhow iskuullada 150 barnaamijkiisa maalmo 100. Dhanka kale bilowga sanad dugsiyeedka ayaa loo qorsheeyay bisha Sebtember 02 waxaana dhamaan DRC laga joojiyay balan qaadkan Madaxa Dowlada. "
(DNK / Haa)
DRC: Dib u eegista saxaafadda kinoise ee Jimcaha 23 Agoosto 2019 - Afrika